ကလော သို့မဟုတ် အနားယူအပန်းဖြေစရာ မြို့လေး | Mizzima Myanmar News and Insight
ကလော သို့မဟုတ် အနားယူအပန်းဖြေစရာ မြို့လေး
ကလောလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အများဆုံး ပြေးမြင်ကြတာကတော့ အေးနေတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးရယ်၊ ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့ တောင်တက်ခြင်း Trekking ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အရင်ကတော့ အလည်လာကြသူတွေဟာ တောင်ကြီးကို အများဆုံးလာပြီး ညောင်ရွှေ၊ အင်းလေး၊ မွေတော်ကက္ကူ အစရှိသဖြင့် လည်ပတ်ကြတာ များပါတယ်။ ဒီတော့ ကလော သို့မဟုတ် ကျော်သွားခံရတဲ့မြို့လေးလို့ ပြောရရင် မမှားဘူးပေါ့။ Trekking တွေ ခေတ်စားလာချိန်မှာတော့ အဲဒီလို မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
ကလောကို သွားမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့၊ အောင်မင်္ဂလာကားဂိတ်တွေကနေ JJ၊ Famous ၊ Elite ကားတွေနဲ့ အခြားကားတော်တော်များများက တောင်ကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲနေတာပါ။ အထူးကား ကျပ် ၂၂၀၀၀၊ ၂၃၀၀၀ ဝန်းကျင်၊ ရိုးရိုးကား ကျပ် ၁၂၀၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ လက်မှတ်ဝယ်နိုင်ပြီး လေအိတ်ပါတဲ့ Express တွေပါပဲ။ ဒီ နှစ်ခု ဘာကွာလဲမေးရင် ထိုင်ခုံအကျယ်အဝန်းပါပဲ။ ၁၃ နာရီကြာ စီးရတာမို့ ဘတ်ဂျက်အဆင်ပြေရင်တော့ ထိုင်ရတာ၊ အိပ်ရတာ ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အထူးကားကိုပဲ ရွေးချယ်ဖို့ အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်။ ကားဂိတ်ကနေ ည ၇ နာရီ၊ ည ၈ နာရီကားတွေ ရှိပြီးတော့ ကလောကိုဆိုရင် မနက် ၅ နာရီဝန်းကျင်လောက် ကားက ရောက်တာကြောင့် တောင်ကြီးမရောက်ခင် ကလောမြို့ထိပ်မှာ ဆင်းနေခဲ့လို့ ရပါတယ်။
လက်မှတ်တွေကိုတော့ ခုခေတ်က App တွေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ငွေပေးချေပြီး ဝယ်ယူနိုင်သလို ဂိတ်ကိုလည်း ဖုန်းဆက်ပြီး Booking လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ရန်ကုန်ဘူတာကြီးရှေ့က ကားဂိတ်တွေရဲ့ အောင်ဆန်းကွင်းလက်မှတ်အရောင်းဌာနမှာလည်း သွားဝယ်နိုင်ပါတယ်။ အပြန်ကိုလည်း ကလောမြို့ထိပ်ကနေ တက်စီးနိုင်ပါတယ်။
နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း သုံးရာသီလုံးက ရာသီဥတုအေးနေတာမို့ အနွေးထည် ထည့်သွားတာက ဘယ်တော့မှ မမှားပါဘူး။ မိုးရာသီမှာတောင် မိုးငွေ့တွေရှိရင် ပိုအေးနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးရာသီဆိုရင် မိုးကာအကျီရယ်၊ အနွေးထည် မထူမပါးတစ်ထည်တော့ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဖိနပ်ကတော့ Trekking သွားမယ်ဆိုရင် ကလောစျေးထဲမှာ အကြမ်းစီးတဲ့ ရှုးဖိနပ်တွေ ရှိပါတယ်။ အောက်ခြေ ကုတ်အားကောင်းပြီး အကြမ်းခံတာကြောင့် တောင်တက်ဖို့လာသူအများစုက လာဝယ်ကြပါတယ်။ စျေးကလည်း ၄၅၀၀ ကနေ ၆၅၀၀ အထိ ရှိတာမို့ စျေးချိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အဖိုးတန်ဖိနပ်ကိုတော့ တောင်တက်မယ်ဆိုရင် ထားခဲ့လိုက်ပါ။ Timberland ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ့်ပါပဲ။
ကလောကို သွားမယ်ဆိုရင် ဟိုတယ်တွေကို စျေးနှုန်း စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ ကျပ် ၂၀၀၀၀ ( ၁၂ ဒေါ်လာခန့် )ဝန်းကျင်ကနေ ၆၃၊ ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော် အထိ စျေးနှုန်းအစားအစား ရှိပါတယ်။ ဘန်ဂလိုလှလှလေးတွေနဲ့ Kalaw Pines Wood ၊ ရှုခင်းလှလှနဲ့ Hill Top Villa ဟိုတယ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်လက်ရာ Kalaw Heritage ဟိုတယ်ကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်တွေပါပဲ။ ၁၉၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Kalaw Heritage ဟိုတယ်မှာ ရှေးစတိုင်လ်မို့ အဲကွန်းတောင်တပ်မထားဘဲ ပန်ကာတွေပဲ ထားပေးထားတာပါ။ ဓာတ်ပုံဝင်ရိုက်လိုသူတွေအတွက် ကျပ် ၂၀၀၀ ဝင်ကြေးကူပွန်ပေးပြီး အဲဒါနဲ့ Heritage ဘားမှာ ကော်ဖီဝင်သောက်လို့ ရပါတယ်။ ကော်ဖီက ၃၀၀၀ ဆိုရင် ကျပ် ၁၀၀၀ ထပ်ပေးရမှာပါ။
ဒါကတော့ မိန်းကလေးသီးသန့်ပါ။ ရာသီဥတု အေးတဲ့အချိန်မှာသွားတာဖြစ်လို့ ဒေသက မြေနီရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်တွေကြားမှာ တောက်ပနေဖို့ ဒါမှမဟုတ် သဘာဝဆန်နေဖို့ ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သဘာဝဆန်ချင်သူတွေအတွက် အနက်၊ အညို၊ အရောင်ခပ်မှိုင်းမှိုင်းတွေနဲ့ ၂၀၁၉ ရဲ့ Trend colour ဖြစ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းရောင်ခပ်ပုပ်ပုပ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပေါ်လွင်နေဖို့ဆိုရင် လူငယ်တွေကြား ခေတ်စားတဲ့ အဝါရောင်၊ နီညို၊ အနီရောင်တောက်တောက်၊ ၀ိုင်ကာလာလိုအရောင်တွေကလည်း အေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ထုတ်ဝတ်မရတဲ့ အနွေးထည်တွေကို သယ်ခဲ့လိုက်ဖို့ပါပဲ။
ဘာတွေ စားမလဲ၊ ဘယ်တွေ သွားမလဲ
ကလောစျေးထဲက အစားအစာတွေက စျေးနှုန်းသင့်ပြီး အရသာရှိသလို စျေးလည်း ချိုပါတယ်။ ဆန်းစီးတစ်ပွဲ၊ တို့ဟူးနွေးတစ်ပွဲ၊ ငါးထမင်းနယ်တစ်ပွဲကို စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၅၀၀ ပဲ ကျပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆို တစ်ပွဲကို ကျပ် ၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀ အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒေသထွက် ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေ၊ အဝစား တစ်ယောက် ၄၀၀၀ ဟော့ပေါ့ကလည်း အရသာရှိ ဆွဲဆောင်နေတာပါပဲ။ သုမောင်မြန်မာထမင်းဆိုင်လို ဆိုင်ကြီးတောင်မှ တစ်ယောက် ကျပ် ၄၀၀၀ လောက်ပဲ ကျသင့်ပါတယ်။
လည်စရာပတ်စရာကတော့ အများကြီးပါပဲ။ Sightseeing Tour တွေ ၊ Trekking Tour တွေ ရှိပြီး Trekking မှာ တောထဲအိပ်ပြီး သဘာဝမှာ သွားလာလည်ပတ်တာကတော့ ကျပ် တစ်သိန်းဝန်းကျင်ကနေ အစားစား ရှိပါတယ်။ Sightseeing Tour တွေကတော့ ကျပ် ၂၅၀၀၀ မှ ကျပ် ၇၅၀၀၀ အပြင် အစားစား ရှိပါတယ်။ ကားငှားပြီး ကားဆရာနဲ့ သွားမဲ့နေရာ ညှိနှိုင်းလိုက်ရုံပါပဲ။ ပင်းတယဂူ၊ ရွှေဥမင်၊ ကလော View Point ၊ ရှမ်းရိုးရာလက်မှုထီးလုပ်ငန်း၊ နှစ် ၅၀၀ သက်တမ်းရှိ ညောင်ပင်ကြီးတွေ၊ စိုက်ခင်းတွေ၊ ပုန်းတလုတ်ရေကန်၊ ရွာငံရေပြာအိုင်၊ မိန်းမရဲတောင် အပါအဝင် အင်းလေး၊ ညောင်ရွှေ၊ တောင်ကြီးတို့ကိုလည်း သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ ကလောမြို့ထဲမှာတော့ ဘုရားကျောင်း၊ Kalaw Heritage ဟိုတယ်၊ ကလောဘူတာရုံ၊ ထင်းရှုးတန်း၊ တောင်ပေါ်လမ်းလေးတွေကတော့ အလည်ပတ်ထွက် ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကလောမှာ ငါးရက်တစ်စျေး ရှိပါတယ်။ ဒေသပတ်ဝန်းကျင်က နယ်ခံတွေ၊ တောင်သူတွေကိုယ်တိုင် လာရောက်ရောင်းချတာပါ။ ကိုယ်ရောက်တဲ့ရက် မမှီလိုက်ရင်လည်း ကလောစျေးက ပုံမှန်ဖွင့်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်ထက် စျေးချို၊ လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဥပမာ ထောပတ်သီး ၁၀ လုံး ၃၀၀၀ ဆိုတာမျိုးက ရန်ကုန်မှာ မရတာမျိုး မဟုတ်လား။
လူငယ်အများစုကတော့ ၀ိုင်ကို အဝယ်များကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျပ် ၁၅၀၀၊ ၄၀၀၀၊ ၈၀၀၀ အပါအဝင် ၀ိုင် အမျိုးအစား အစားစားရှိပြီး မက်မန်းဝိုင်၊ စပျစ်ဝိုင်တွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ အပြန်လက်ဆောင်ကတော့ လက်ဖက်အစို၊ အခြောက်၊ တို့ဟူးခေါက်၊ စွန်တန်ခြောက်၊ နေကြာစေ့၊ ပဲပုတ်၊ မြေပဲ၊ ယိုမျိုးစုံ ၊ ဒေသထွက် အဝတ်အထည် စသည်ဖြင့် စုံလင်လှပါတယ်။
ချုပ်ပြောရရင်တော့ သေချာစီစစ်ပြီး သွားလာရင်တော့ ကလောကိုသွားရတာ စျေးတန်ပြီး လတ်ဆတ်တဲ့လေ၊ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ တောင်ပေါ်မြို့ရှုခင်းတွေကတော့ နေ့စဉ်ဘဝထဲက ခဏတော့ ပြေးထွက်နိုင်မှာပါ။
No.3Quarter, University Road, Kalaw ,Shan State , 081 50 039 360 Kalaw Hotel 128 Wingabar Lane, Kalaw ,Shan State, 09 45033 3360
151, Oo Min Road, Kalaw, Southern Shan State, 95-81-50079, 50303, 50304, [email protected]
11 Quarter, Nanthe' Village, Kalaw, 081 - 50865, 50866, 50867, 50868, 09-458116063, [email protected]
No.7Quater, Thittaw Street, Kalaw, Southern Shan State, The Pinewoods Kalaw Htin Shu Si Sat Lan, Kalaw, Kalaw, Kalaw, Myanmar
JJ Express - Yangon - Mandalay Expy, Mingaladon, 09 977 181230 Elite Express -171/A), No.3 Main Road, Mingalardone Township, Yangon ,Aung Mingalar, 01 636699, 09 7322-3223
Famous Traveller Express- Sagaing street ,Aung Mingalar high way bus station, NorthOakkalarpa Tsp, Yangon, 09 788 006611
Ko Sai Car Rental Services, Kalaw, 09 42831 5368 Thaung Htike Car Rental Service, 09 253 645 104 Kalaw Landscape car rental & taxi Services, 09428313702, 09791107664
Ko Min Kalaw Trekking Service, 09 979 859203 ၊ Ko Kyaw Kalaw Trekking, 09 42837 0225၊ Kenneth's Green Land Trekking, 09 975 754285 ၊ Pho Nyan - Taxi and Trekking, 09 430 39743
--Mizzima Key Campaign မှာ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Visit Our website: http://building.mizzimafoundation.org/
အမေရိကန်၌ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၁ ၃၀၀ ၀၀၀ ကျော်နှင့် သေဆုံးသူ ၈၀ ၀၀၀...
နေပြည်တော်ကနေ ရန်ကုန်အပါအဝင် မြို့ကြီး ၅မြို့ကို ယာဉ်လိုင်းအချို့ ပြန...